က ISO, ASA နှင့် DIN | Gadget သတင်း
က ISO, ASA နှင့် Din
သတင်း | | ဓာတ်ပုံ
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၏ဓာတ်ပုံအရ sensitivity အညွှန်းကိုရည်ညွှန်းသောအခါ photosensitive မျက်နှာပြင်တစ်ခုသို့မဟုတ် sensor အကြောင်းပြောသောအခါ ISO အကြောင်းပြောနေသည်။ လူတိုင်းသိလိမ့်မည်မဟုတ် ISO သည် International Standard Office ကိုဆိုလိုသည်အထူးသဖြင့်အချိန်တိုတိုအတွင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ရိုက်ကူးသူများသာ ISO သည်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရလိမ့်မည်။
အတိတ်ကာလ၌, ISO sensitivity ကိုတန်ဖိုးများအဖြစ်လူသိများခဲ့သည် DIN (Deutsche Industrie Normen)နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူကအမည်ပြောင်းခဲ့သည် ASA (အမေရိကန်အဆင့်အသင်း)။ ASA နှင့် ISO တန်ဖိုးများသည်တူညီကြသည်။ ၎င်းသည်အမည်ကိုသာပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သို့သော် DIN တွင်ကိုင်တွယ်ရာတွင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် sensitivity ကိုနှစ်ဆသောအခါ DIN တန်ဖိုးသည်ယူနစ်သုံးခုတိုးလာသည်၊ ASA နှင့် ISO တန်ဖိုးများတွင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုဖြင့်မြှောက်။
အောက်တွင် ISO-ASA နှင့် DIN အကြားညီမျှမှုရှိသည်
နောက် ... ပြီးတော့
ဆိုဗီယက်အုပ်စုတွင်မတူညီသောထိခိုက်လွယ်မှုအတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမှာခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည် GOST ကျန်ရှိနေသေးသော (Gosudarstvenny Standart ပြည်နယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်) 1987 အထိ။ ISO-ASA / GOST စကေးမှာ -
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » ဓာတ်ပုံ » က ISO, ASA နှင့် Din
အလွန်ကြီးစွာသောအလှူငွေပုဂ္ဂိုလ်ရေးစုဆောင်းခြင်းမှတိုက်ရိုက်ပါ! သတင်းအချက်အလက်သည်ဓာတ်ပုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးဝင်သည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လူတိုင်းသိပြီးသင်ဓာတ်ပုံဆရာချင်းများထက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
King David de las Mañanitasအားပြန်ကြားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လည်ပတ်မှုသည် ASA နှင့် ISO အကြားညီမျှမှုကိုအတည်ပြုရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ဒါဟာperfectlyုံရှင်းလင်းခဲ့သည်။
DIN (Deutsche Industrie Normen) သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်အတွက်ဂျာမန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ASA (American Standard Association) သည်စံသတ်မှတ်ချက်အတွက်အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မတူကွဲပြားသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ISO ဆိုသည်မှာယခင်စံများကိုအစားထိုးခြင်းမပြုသော International Standard Office ကိုဆိုလိုသည်။ ဓာတ်ပုံ sensitivity အတွက် ISO သည်ပိုမိုကြီးမားသောအကောင်အထည်ဖော်မှုကြောင့်၎င်းသည် ASA ကိုယူသောစံကိုသတ်မှတ်သည်။ သို့သော်စာရွက်စာရွက်များ၏အရွယ်အစားတွင် ISO သည် DIN ၏စံနှုန်းကိုရယူသည်။
Verizon သည် US ရှိလေဆိပ် ၆၀ ကျော်နှင့်မြို့ကြီး ၆၈ ခုသို့ LTE ကိုရောင်းချမည်
PC keys ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ